AMBATO BOENY SY MAROVOAY : Miaramila iray mitantara ny habibiana sy ody maherin’ireo dahalo
Voalaza fa manao ody bala sy tsy lai-by ireo dahalo ao amin’ny distrikan’i Marovoay sy Ambato Boeny ao, ka hatramin’ireo miaramila sy zandary dia miahotra vao sahy mifanandrina amin’izy ireo. 11 juillet 2018
Araka ny notantarain’ny miaramila iray izay namita iraka tany an-toerana dia tsy mety maty ireo dahalo na dia voatifitra aza. “Raha mbola vy ihany no miditra amin’ny tenany dia tsy mety maty mihitsy izy ireo”, hoy hatrany izy. Efa ‘chargeur’ iray no lany araka ny fanazavany nefa dia mbola mitsangana ihany ilay dahalo.
Tsy mampino, hoy izy ary misy mihevitra fa kanosa izahay, saingy mafy ny atrehina rehefa manara-dia omby, indrindra rehefa sendra tranga tahaka izao. Tamin’iny faritra Sitampika iny moa no niasan’ity miaramila ity. Manana fitaovam-piadiana mitovy amin’ny an’izy ireo ihany koa ireo dahalo indraindray, hoy hatrany ny fanazavany, dia kalachnickov sy mas 36. Ankehitriny, hoy izy, ireo dahalo dia mandeha andiany am-polony maro rehefa manafika tanàna.
Tsy vitan’ny mangalatra izy ireo fa mbola mandoro tanàna ihany koa ary misy ny maka takalon’aina amin’ireo vahoaka, tsy mifidy fa hatramin’ny zaza amam-behivavy. Tranga anisany nampivarahontsana ahy, hoy izy tamin’iny faritra Sitampika iny hatrany dia raim-pianakaviana iray izay lehiben’ny dina teo aloha no novonoin’ny dahalo ary norasarasainy, tahaka ireny mandrasa hena ireny. Avy eo dia notereny ny havany hihinana ny nofony.
Nambarany ihany koa fa misy tranga hafahafa miha mahazo vahana ankehitriny. Ankoatry ny asan-dahalo mahazatra sy fahita hatramin’izay dia lasa mifanafika ny samy tanàna kely. Mihalany tamingana ny omby noho ny asan-dahalo, hany ka tsy misy intsony hatramin’ny hampiasaina any an-tsaha. Matetika dia fantatr’ireo olona ao an-tanàna ireo olona tonga mandrava azy ireo, saingy rehefa tsy sahiny iny dia tanàna hafa indray no ravainy, angalarany omby. Mampisy lonilony eo amin’ny fiarahamonina io tranga io, hoy hatrany izy, ary atahorana ny fivoarany ho amin’ny tranga hafa.
Na izany aza dia mbola ilaina sy atokisan’ireo mponina hatrany ny fisian’ny miaramila manao DAS, na détachement autonome de sécurité. Mbola mangataka hatrany izy ireo saingy amin’izany dia ny mponina no miantoka ny filan’izy ireo, amin’ny sakafo sy ny fatoriana.
Miriaria eran’ny tanàna sahady ireo lehilahy nahavanon-doza FANAFIHANA MPIVADY TANY BETSIAKA -AMBILOBE (350) 22 octobre 2020 Olona 04 naratra, vola 2 tapitrisa ariary lasan’ireo jiolahy miisa enina AMBILOBE (116) 21 octobre 2020 Tovolahy nisandoka ho mpitandro filaminana sarona ny alarobia teo ANKAZOMANGA (103) 22 octobre 2020 Sarona ireo 12 lahy mpampihorohoro sy mpanao fanafihana IMERINTSIATOSIKA (93) 21 octobre 2020 Nahanjahanjan’ny vahoaka irery ireo parlemantera mpanohitra AMBATONDRAZAKA (85) 26 octobre 2020 Lehilahy tompona “Agence de voyage” nadoboka am-ponja FIVADIHAM-PITOKISANA (65) 22 octobre 2020